इनडोर आउटडोर LED डिजिटल भिडियो नेतृत्व स्क्रीन चमक र दृश्य कोण - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
इनडोर पूर्ण रंगको एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको चमक 800cd / m2 भन्दा माथि हुनुपर्दछ, र को चमक आउटडोर पूर्ण रंग एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन माथिको हुनुपर्छ 1500?सीडी / एम २ एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको सामान्य प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न, अन्यथा यो देखिने छ किनकि चमक पनि कम छ. प्रदर्शित छवि खाली गर्नुहोस्. यदि वातावरण धेरै उज्जवल छ, कृपया एलईडी वा रियर प्रक्षेपण पहिले प्रयोग गर्नुहोस्. चमकको स्तर मुख्यतया LED डाईको गुणस्तर द्वारा निर्धारण गरिन्छ। हेर्ने कोणको आकारले प्रत्यक्ष रूपले LED इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनको अवलोकन क्षेत्रको लागि ठाउँको मात्रा निर्धारित गर्दछ, त्यसोभए ठूलो त्यत्ति नै राम्रो. हेर्ने कोणको आकार मुख्य रूपमा LED चिप द्वारा निर्धारण गरिन्छ.
1. सेतो सन्तुलन प्रभाव सेतो ब्यालेन्स प्रभाव एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनहरूको एक महत्त्वपूर्ण सूचक हो. रंग विज्ञानमा, जब रातो तीन प्राथमिक र ofहरूको अनुपात, हरियो र निलो छ 1:4.6:0.16, शुद्ध सेतो प्रदर्शित हुनेछ. यदि वास्तविक अनुपात मा एक सानो विचलन छ भने, त्यहाँ सेतो ब्यालेन्स को एक विचलन हुनेछ. सेतो ब्यालेन्सको गुणवत्ता मुख्यतया LED चिप द्वारा निर्धारण गरिन्छ. चिपले र color प्रजननमा पनि प्रभाव पार्छ
2. र reduc रिडिएबिलिटि र reduc्ग घटाईले एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको र of्ग रिडिएबिलिटीलाई जनाउँछ. त्यो हो, एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनमा प्रदर्शित र color प्लेब्याक स्रोतको रंगसँग अत्यधिक अनुकूल हुनुपर्छ, तस्विरको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न को लागी.
3. जे होस् मोजेक वा मृत स्थान घटना मोजेकले साना चमकदार चार वर्गलाई सares्केत गर्दछ जुन सँधै उज्यालो वा कालो हुन्छ जुन एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनमा देखा पर्दछ।, जुन मोड्युल नेक्रोसिसको घटना हो. मृत स्पटहरूको संख्या मुख्यतया LED चिपको गुणवत्ताले निर्धारण गर्दछ.
4. त्यहाँ र color्गीन ब्लक र block्ग ब्लक छ कि सानो क्षेत्रमा रंगको अभाव हो; मुख्य कारण नियन्त्रण आईसी र विद्युत आपूर्ति हो, र कन्ट्रोल सर्किट तारको गुणस्तर.
5. एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन को उपस्थिति एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को उपस्थिति सबैभन्दा सहज छ, उत्पादको गुणस्तरको सबैभन्दा प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न सबैभन्दा आदिम. देखा पर्ने गुणवत्ताले निर्माताको उत्पादन टेक्नोलोजी र सामग्रीको गुण प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछ.